Daawo:Xildhibaan Buuhoodle kasoo jeeda oo Yuhuud ku Tilmaamay Isaaqa Ku jira Dawlada Somalia – KHAATUMO NEWS
Daawo:Xildhibaan Buuhoodle kasoo jeeda oo Yuhuud ku Tilmaamay Isaaqa Ku jira Dawlada Somalia
Previous Post: Deg Deg:Farmaajo diyaariyay Mooshin lagu rido Madaxweyne Ku xigeenka maamulka……
Next Post: Daawo:Cod sir ah oo laga Duubay Abiy Axmed oo leh Geeri ayaan ka xiga inan ka Dago Xukunka!!
Hadii sidaa Yuhuud lagu noqonayo Dhulbahante ayaa uugu dhow Yuhuudnimada aad sheegtay. Sababtuna waa, adigu waxaad tahay xildhibaan Puntlanan hadana waxaad mar walba u ooyaysaa Buuhoodle ah. Maxaad uuga hadli wayday arrimaha ka taagan gobalka Bari, Boosaaso iyo Qardho ee aanu kaligayo kula dagaalano cadowga Al-Shabaab mise idinku dalka ka mid tihidin.
horta qof aqlile kalmada qanis layidhahdo afkisa wu kala xishoda somaliland waxkhanis ah oo jooga majiro manalaha marka lakarebo kuwa dibadaha lakushekayo ee somalida ah ee raba in ay fasahadiyan kuwa dalka joga maha qof qof kale kusheka waxanu ahayna isaka laftikisa waxa ushekayo kamid ah wayo dhilo inta anad dhilo ku odhan ayay dhilo kukutidhahda lasoco runta
Nimankiina yuhudka ah,malin uun ayan ismaqlidoona, wasaq khaniisiyintu mar unn ayan idii qalii doona.
war niyow inankan anika oo reer somaliland ah ayaba jacayl ihayaye reer caynow waa in la idhiso wan ku cashaqsanahaye ha la isoo qabto please
Kan hooyadii wali uur bay qaadi karta.
Ha loo sheego haduu dhidhiibsanwaayo walle in hooyadii lagu hor guursan doono oo ilmo yar oo walaaloyihiin oo Somalilander ah u dhali doonto.
U sheega yarka hungurigu kale hadliyey in xamarna lagaaga badsadey.
Reerkan qudhunka ee ciilka qaaba ee itaalka liita ee hadana dadka la heshiin karayn maxay ahyeen horta adeer inbadan baanu idin dulqadane afka naga dhiga wllhi nasabnimo idinka foge tolka harti heshiis lama tihin idinku. Heshiis matihin cid kale heshiis matihin sidaad wax ledihin afxumana waad laso tagan tihin reerki intay isku yimadeen ee kuheshiiyey inay sedex madaxweyne yeeshan baad tihin heerkaas buu xaalkini maraya ilahay baad ledihin ee afka xumada iyo aflagadada naga daaya saab yahay
subxana Allah nacayb reer diinta ha uga bixina , Dadaal sameeya sidooda , Ilahayna waa idin garab gelayaa wa bilaahi tawfiiq
Hassan Aw Aden Buraale